maanta sexrubriker | Apg29
Taas oo wargeyska ayaad leedahay sexrubriker?
Photo: Magaca magazine ayaa waxaa shaaca ka qaaday in maqaalka.
Expressen iyo Aftonbladet jira laba wargeysyada in inta badan tixraac jinsiga ah ee qaar ka mid ah qodobadiisa, laakiin waxa ay aaminsan yihiin ama ma, horyaal, kuwaas oo aan ka timid mid ka mid ah wargeysyada kuwan.
"Maxaa dhacaya haddii Nuun a galmo?"
"Waa in aan sii wadaan in ay galmo aan ninna oo naga mid ah doonaysaa?"
Mid ka mid ah lahayd in ay jirto Aftonbladet iyo wargeyska Expressen ayaa ku qoran, kuwaas oo headlines iyo articles, ma, waxa run ahaantii waa wargeyska Christian Day. Sidaa aan wax yar ordfynderi "Maanta sexrubriker".
Noqo ka badan diiradda
Waa maxay baahida dadka waa Ciise Masiix, kaas oo wargeyska maalin The waa in ka badan la diiradda lagu siinayo. Markaas waxaa laga yaabaa in si xataa waxyaalaha kale.